Health Related Forums > Health News and Events
* Aqoon darri iyo xanuunka oo laga fahansan yahay fikrado qaldan taasoo keenayso in qofka xanuunka qarsado ama daawo uu raadsan waayo, dad badan ayaa u arkay in qaaxada hadiiay kugu dhacdo ay ceeb tahay, dad ayaa aaminsan in laga qaado gaajada.
* Daawada qaaxada oo laga ganacsado oo uu qofkii rabo isticmaali karo, ha u baahnaado ama yuusan u baahan, meesha wadamada kale ay xadidan tahay oo aadan heli karin daawada illaa in nidaam la yaqaanno soo martid mooyee.
* Nidaam daawada lagu bilaabo ama lagu kontarool oo sax ah kama jiro dalkii waa laga yaabaa hay'ado qaar in ay leeyihiin nidaam u gaar ah oo daawada ku bixiyaan.
* Ma jiro nidaam dabakac iyo wacyi galin oo looga hortagayo in daawada aanan la joojin iyo dhibaatooyinka ka dhalan karo, maxaa yeelay dadka ugu badan ee daawada la qabsaday waxay ka timid in ay daawadii ka tageen iyagoo aanan wali dhamaysan koorsigii loogu talagalay.
* Daawada tayadeeda oo aan kontaroolneyn tanoo iyadane ah midda labaad ee badinaysa qaaxada daawada la qabsatay.